अनुसन्धानले पत्ता लागायो कोरोनाको संक्रमण जबरजस्त यस्तो ग्रन्थीमा रहने - Babal Khabar
काठमाडौं । विश्वलाई कोरोना महामारीले दुःख दिन थालेको एक वर्ष बितेको छ । यो बीचमा कोरोना भाइरस नयाँ–नयाँ रुपमा साथ आइरहेको छ । भाइरसको स्वरुप परिवर्तन भएसँगै त्यसका लक्षण र उपचार पनि फरक–फरक हुँदैछन् । अहिले नयाँ खालको कोरोना लक्षणहरुबारे चर्चा शुरु भएको हो ।
हालै बाहिर आएको एक अनुसन्धान अनुसार कोरोना संक्रमित व्यक्तिहरूका लागि एक सान्त्वनादायी समाचार आएको छ । जसले स्वाद र गन्ध महसुस गर्न सक्दैनन्, यस्ता बिरामीहरूका लागि भाइरस त्यतीँ गम्भीर नहुने खुलेको हो । यो अध्ययन जीएसवीएम मेडिकल कलेजमा २२० बिरामीहरुमा गरिएको थियो ।
अन्वेषक डा. हरेन्द्र कुमार भन्छन् कि अनुसन्धानका लागि दुई कोटीहरू सिर्जना गरिएको थियो । त्यस, कोटीमा बिरामीहरू लगिएका छन् जसले स्वाद र गन्ध पाउँदैनन् । अर्को कोटी ती बिरामीहरू थिए जसले स्वाद र गन्ध थाहा पाइरहेका थिए ।
जब ती दुबैमा तुलनात्मक अध्ययन गरिएको थियो, तब यो पत्ता लाग्यो कि स्वाद र गन्ध थाहा नपाउने जम्मा नौ बिरामीहरू भर्ना भएका थिए । ५० जना मानिसहरूलाई अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो जसले स्वाद र गन्ध थापा पाइरहेका थिए । ति मध्य आठजना मानिसहरुको मृत्यु पनि भएको जानकारी दिइएको छ ।
ईएनटी विभागका अन्वेषक डा. हरेन्द्र कुमार भन्छन्, ‘यो अनुसन्धानमा हेर्नुपर्‍यो कि कोरोना भाइरसको संक्रमणले स्वाद र गन्धलाई कसरी असर गर्छ । कति हदसम्म बिरामीहरू गम्भीर छन् ।’
मेरठ मेडिकल कलेजले यसबारे अनुसन्धान पनि गरिरहेको छ, करीव ५० बिरामीमा पनि यस प्रकारको खोजी भेटिएको छ । उनले यस विषयमा एउटा शोधपत्र लेखिरहेको पनि उल्लेख गरेका छन् ।
उक्त अनुसन्धान गर्ने डाक्टर हरेन्द्र कुमार भन्छन्, ‘स्वाद र गन्ध नलागेका प्रायः बिरामीहरूलाई सामान्य औषधी र घरमा अलग्गै राखिएको थियो । यो पत्ता लाग्यो कि उनी १० देखि १५ दिन भित्र कोरोना नकारात्मक भयो । यद्यपि स्वाद र गन्ध थाहा नपाएको गुनासो केहिमा एक महिना र डेढ महिनासम्म रह्यो ।’
डा. हरेन्द्र कुमार भन्छन्, ‘अनुसन्धानको क्रममा पत्ता लाग्यो कि नाकमा रहेको ओलिफेक्टिटरी ग्रन्थीमा कोरोनाको संक्रमण जबरजस्त थियो ।
कोरोना भाइरस त्यस्तै रह्यो र न त यो दिमागमा जान सक्छ न त फोक्सोमा जान सक्छ । यस्तो अवस्थामा मस्तिष्क र श्वासप्रश्वास प्रणाली सुरक्षित छ । बिरामीलाई एक तीव्र आर्गन विफलताबाट बचायो ।
Prevमास्क धोएर लाउन मिल्छ? कि मिल्दैन? डाक्टरको सुझाव यस्तो छ,हेर्नुहोस्।
nextप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई हराउने उपयुक्त समय आएको : अष्टलक्ष्मी शाक्य